rayhab မော်ကွန်း (လစဉ်) - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homerayhab - မီးရထားသတင်းနှင့်လေလံပွဲrayhab မော်ကွန်း (လစဉ်)
RAYHAB ဖြစ်ပါသည် ဒါဟာဇန်နဝါရီလ 01 2012 အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။4။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်အရွယ်ဝင်သကဲ့သို့, ရထားလမ်းစနစ်က 20 နှစ်ပေါင်း RAYHAB သတင်း archive ကိုဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့တာဝန်ခံအခမဲ့သင်ပူဇော်ဖို့ဂုဏ်ယူကြသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25.000 ရက်စွဲထက်ပိုပြီး, တည်နေရာ, အကြောင်းအရာများနှင့် 120.000 ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထက်ပိုပြီးလည်းရရှိနိုင်ကြှနျုပျတို့၏ website ၏အခြေခံပေါ်မှာခွဲခြား Sub-ကဏ္ဍများအတွက်သတင်း။
မီးရထား, မြေအောက်ရထား, အလင်းရထားလမ်း, ပေါ်လာတာဟာအရင်, cable ကိုကားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားတင်ဒါ, 150 ကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်စကင်ဖတ်ဖို့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နူးညံ့သောစာစောင်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအခမဲ့မည်သူမဆိုနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်။
လစဉ် Ray သတင်းများမော်ကွန်းတိုက်များအတွက်အောက်ပါလကိုရွေးချယ်ပါ:
--	စက်တင်ဘာလ 2019 (397) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3)
တသောင်းနှစ်ထောင်လွန် Rayhab မော်ကွန်းတိုက်သတင်း (အထူးအစီရင်ခံစာ) 17 / 01 / 2013 တိုးတက်မှုချက်ချင်း, တူရကီနှင့်ကမ္ဘာရထားလမ်းစနစ်များကိုလယ်ပြင်၌ လုပ်. , လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုစီမံကိန်းနှင့် rayhab ဆိုဒ်ရထားလမ်း 1 ပတ်သက်. သတင်းအပေါ်အသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်ထူထောင်ခဲ့သည်အဖြစ်သတင်းလုပ်ဖို့မှန်ကန်သောလမ်းကိုရိပ်မိခဲ့သည်။ တထောင်လက်မှတ်ပေါင်း archive ကိုနှင့်အတူအဓိကအောင်မြင်မှုသွင်းယူခဲ့သော 12 haberlik နှစ်ပေါင်း။ အတိတ်နှင့်လူ၌အကြှနျုပျတို့၏ site ကိုမှနေ့စဉ်ဧည့်သည်၏နံပါတ် 1 ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းဆိုက် 10.000 နှစ်ပေါင်း rayhab, ထိုရထားလမ်းစနစ်၏ယနေ့သတင်း 12.000 တစ်ကိန်းဂဏန်းရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါ့အပြင် 11 3.000 ထက်ပို၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီစာရင်းရောက်ရှိနိုင်ရထားလမ်းစနစ်များကိုမှကွဲပြားခြားနားသော Sub-အမျိုးအစား / ထုတ်လုပ်သူအတွက်ခွဲခြား။ ရထားလမ်း ...
လွန် Rayhab မော်ကွန်းတိုက်သတင်းများဆယျ့ငါးထောငျ (အထူးအစီရင်ခံစာ) 07 / 05 / 2013 တိုးတက်မှုချက်ချင်း, တူရကီနှင့်ကမ္ဘာရထားလမ်းစနစ်များကိုလယ်ပြင်၌ လုပ်. သတင်းနှင့်ရထားလမ်းကျွန်ုပ်တို့၏ rayhab site ကိုသူ archive ကိုအတူသိသိသာသာအောင်မြင်မှုရရှိပစ်ချစနစ် 15 တထောင် haberlik ပတ်သက်. သတင်းအပေါ်အသိအမြင်ကိုဖန်တီးရန်ထူထောင်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမယ့်လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုစီမံကိန်းကိုအတိုင်းဤအနက်ရှိသည်ဟုအရှိဆုံးတိကျမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အတိတ်နှင့်လူ၌အကြှနျုပျတို့၏ site ကိုမှနေ့စဉ်ဧည့်သည်၏နံပါတ် 1 ထိုကဲ့သို့သောအချိန်တိုအတွင်းဆိုက် 10.000 နှစ်ပေါင်း rayhab, ထိုရထားလမ်းစနစ်၏ယနေ့သတင်း 15.000 တစ်ကိန်းဂဏန်းရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဒါ့အပြင် 11 3.000 ထက်ပို၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ကုမ္ပဏီစာရင်းရောက်ရှိနိုင်ရထားလမ်းစနစ်များကိုမှကွဲပြားခြားနားသော Sub-အမျိုးအစား / ထုတ်လုပ်သူအတွက်ခွဲခြား။ ကမ်ဘာပျေါမှာရထားလမ်းစနစ်က ...
ထိုအခါလစဉ်ကို Maintenance Uludag နှင်းလျှောစီးနွေရှုခင်းသာခရီးစတင်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ 28 / 04 / 2012 မြို့လယ်မှ cable ကိုကားတစ်စီးကနေ Uludag Bursa သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ထို service ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝင်ရောက်ပြီးနောက်အကြောင်းကိုတစ်လတစ်မူထူးခြားတဲ့နွေဦးပါဝင်သည်ဟုစီးဖို့ရွေးချယ်သောသူတို့၏အမျိုးအကြီးမြတ်အမြင်များအတော်ပင်။ သတင်းအချက်အလက်အရသူသည်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်၏အဆုံးကနေအမှုဆောငျဖို့စတင်ခဲ့တဲ့လစဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကား 49 နှစ်ပေါင်းလည်ပတ်သည့်မြူနီစီပယ်ကနေလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်ထားသမျှသောလျှပ်စစ်နှင့်လြှပျစစျစနစ်များ, Uludag အခြားရွေးချယ်စရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနွေရာသီ, ဆောင်းရာသီကြိုး cable ကိုကားတစ်စီး, ဆောင်းတွင်းလအတွင်းအဖြူနှင့်မိုဃ်းပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းနှင့်အတူအစိမ်းရောင်နှင့်ဖုံးလွှမ်း, ဤကာလအတွင်းနွေဦး၏ဂုဏ်အသရေနှင့်အတူစီးကြိုက်တတ်တဲ့သောသူတို့အဘို့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ ကေဘယ်လ်ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏လူကြိုက်များနည်းလမ်းများဖြစ်လာသည်ရာမကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးမြှင့်ခရီးသည်များ၏အရေအတွက်, ရွှေ့ ...
အဆိုပါ Marmaray Project မှလစဉ်တိုးတက်မှုဗီဒီယိုသင်တန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအောက်တိုဘာလ 2011 30 / 10 / 2011 အဆိုပါ Marmaray Project မှလစဉ်တိုးတက်မှုဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်ကိုအောက်တိုဘာလ 2011 ရင်းမြစ်၏ဗီဒီယို: ECMT
တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏သုံးလပတ်အမြတ် 11 / 04 / 2013 မတ်လအတွက်အဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, 31 49 သန်း 524 တထောင်တံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးယာဉ်များဖြတ်သန်းရာမှဒေတာများအရသိရသည်ဝင်ငွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ 63 873 254 သန်းပေါင်ကဒီအကူးအပြောင်းကနေဆင်းသက်လာခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 2013 ၏ပထမသုံးလအတွင်းတံတားများနှင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဖြတ်ကူးတထောင် 85 828 243 သန်းမော်တော်ယာဉ်များ, 178 သန်း 562 720 တထောင် TL ထံမှဝင်ငွေဖြစ်ခဲ့သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသန်းတထောင် 13 70 420 17 အပါအဝင်ယခုတထောင်သန်းယာဉ်များစုစုပေါင်း 979 104 ခဲ့စဉ်အဝေးပြေး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုထံမှအချက်အလက်များ, မတ်လ 31 49 524 အတွက်တံတားများသန်းတထောင်အရသိရသည်။ တံတားကနေမတ်လ 18 923 သန်း ...
တသောင်းနှစ်ထောင်လွန် Rayhab မော်ကွန်းတိုက်သတင်း (အထူးအစီရင်ခံစာ)
လွန် Rayhab မော်ကွန်းတိုက်သတင်းများဆယျ့ငါးထောငျ (အထူးအစီရင်ခံစာ)
ထိုအခါလစဉ်ကို Maintenance Uludag နှင်းလျှောစီးနွေရှုခင်းသာခရီးစတင်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီ
အဆိုပါ Marmaray Project မှလစဉ်တိုးတက်မှုဗီဒီယိုသင်တန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးအောက်တိုဘာလ 2011
Macka Taşkışla Cable ကိုကားလိုင်း
TCDD Kayseri - Nigde - Ulukışla - Mersin - Adana - ဂျီအက်စ်အမ်-R နဲ့ Transmission Systems ကစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါဖြတ်တောက်ခြင်း Toprakkale ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်
လက်ထောက်အော်သံ Ovit ကနေကြေငြာချက်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မတ်လ 1 1925 ပြည်နယ်မီးရထားမီးရထားထုတ်ဝေလစဉ်ဂျာနယ်အားဖြင့်အတင်းအကျပ်ခဲ့သည်။
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (397) သြဂုတ်လ 2019 (506) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)